Izilwanyana Zasekhaya | Eyenkanga 2021
Iindaba Iziyobisi Vs. Umhlobo Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Uluntu, Inkampani Imfundo Yezempilo Inkampani, Ukuphuma Imidlalo Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Inkampani Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Ulwazi Lweziyobisi Iindaba, Impilo Cinezela Ukuzonwabisa Inkampani, Iindaba
Misa ukurhawuzelela: Ungazinyanga njani i-aleji kwiikati kunye nezinja
Izilwanyana zasekhaya nazo zinokungabikho komzimba, nazo. Kodwa ngaba kukho ukhuseleko malunga neenja okanye iikati? Nalu unyango lwamayeza ezinja kunye neekati anokunceda.
Ungayinyanga njani iarthritis ezinjeni
Njengabanini babo, izinja zinokuphuhlisa i-arthritis njengoko zikhula. Akukho lunyango lwe-arthritis kwizinja, kodwa unokunceda umntwana wakho ukulawula iimpawu.
Jonga izibonelelo ezi-5 zempilo zokufumana ikati
Iikati zisenokungabi nanto, kodwa zinokuba nempembelelo entle kwimpilo-yakho ekunciphiseni uxinzelelo nasekuthinteleni i-aleji.
Indlela yokulawula isifo seswekile ezinjeni
Kukho iindlela zokunyanga isifo seswekile ezinjeni, ukuze umntwana wakho abe secaleni kwakho kwiminyaka ezayo. Nazi iimpawu zesifo seswekile ezinjeni kunye nonyango.
Yintoni ebalulekileyo ukwazi malunga nokunyanga izinja ngexhala
Xa umntwana wakho esoyika, ngamanye amaxesha iRx inokunceda. La mayeza okuxhalabisa inja ayafumaneka kwikhemesti yakho yasekuhlaleni.
Ungakuphatha njani ukuxhuzula ezinjeni
Ukuthinjwa kwenja okokuqala kungoyikisa kodwa kunqabile ukuba kusongele ubomi. Funda into onokuyilindela kutyelelo lwezilwanyana, indlela yokuphatha ukuxhuzula inja, kunye nokonga kwimedali yezilwanyana zasekhaya.
Ungazigcina njani izilwanyana ezizolileyo nge-4 kaJulayi
Izinja kunye neekati ngokufanayo zinokuphangwa ngokulula yimililo. Gcina izilwanyana zakho zizolile ngalo Lwesine kaJulayi ngokuzilungiselela ngokufanelekileyo ngezi ngcebiso.
Uyigcina njani inja yakho isempilweni- kwaye ikhuselekile- kwipaki yenja
Izinja zixhomekeke kuwe ukuthintela iingozi ezinokuziswa yindawo yokudlala yoluntu. Ukusuka kwisikhohlela senja ukuya kumkhuhlane we-canine-nantsi indlela yokugcina inja yakho isempilweni kwipaki yenja.
Ungayinyanga njani intlungu yesilwanyana sakho
Xa ikati okanye inja yakho isezintlungwini, konke ofuna ukukwenza kukwenza bazive bebhetele. Ezi zinto zintlungu zeekati kunye neemedali ezithile zabantu zinokubonelela ngesiqabu kwizinja.
Ngaba kukhuselekile ukwabelana ngamayeza nesilwanyana sam sasekhaya?
Njengabantu, izilwanyana zakho ngamanye amaxesha zifuna amayeza. Ngaba ungabelana ngeemedali zakho nesilwanyana sakho sasekhaya? Fumana iimpendulo koku kunye neminye imibuzo emiselweyo yesilwanyana sasekhaya.
Nantsi indlela yokwenza isilwanyana sokuqala sonyango (kwaye kutheni kufanele)
Izixhobo zoncedo lokuqala zezilwanyana zasekhaya zibandakanya izinto ezikhoyo ezikhemisti zalapha ekhaya. Ezi zinto zili-12 kufuneka zibe kwizixhobo zoncedo lokuqala zezinja kunye nabanye abahlobo abanoboya.
Oko kufuneka ukwazi ngokubeka inja yakho kwiProzac
Izinja zinokuba noxinzelelo. Kwiimeko ezinzima, oko kunokuthetha amayeza-njengeProzac yezinja. Ukuba umntwana wakho ubonakala enoxinzelelo, nantsi into ekufuneka uyenzile.
Ndingazigcinela amayeza izilwanyana zam zasekhaya?
Ngamanye amaxesha amayeza abantu anokumiselwa kwizilwanyana zasekhaya, nazo. Sebenzisa ii-singleCare's pet meds coupons kwiikhemesti zalapha ekhaya kwaye ugcine ukuya kuthi ga kwi-80% kwimigqaliselo yezilwanyana zasekhaya.
Izaphulelo ezi-10 eziphezulu kumayeza esilwanyana nge-SingleCare
I-SingleCare ibonelela ngokonga amayeza kumawakawaka amachiza. Nazi iindlela zonyango ezili-10 eziphezulu onokuzigcina kakhulu ngekhadi lethu lesaphulelo.
Uthini umahluko phakathi kwe-metoprolol succinate kunye ne-metoprolol tartrate
Nguwuphi umahluko phakathi komkhuhlane a kunye no-b?
yintoni i-tsh kuvavanyo lwegazi
Ndifuna i vit vit
indlela yokufumana simahla imitya yovavanyo lwelite freestyle
Iziyobisi Vs. Umhlobo